Fanatanjahantena bakalorea :: Ankizivavy iray namoy ny ainy taorian’ny hazakazaka • AoRaha
Fanatanjahantena bakalorea Ankizivavy iray namoy ny ainy taorian’ny hazakazaka
Fahafatesana tampoka. Tovovavy iray, 21 taona , no fantatra fa namoy ny ainy nandritra ny fanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena bakalorea, tany Moramanga, tamin’ ny alakamisy lasa teo. Tsy fantatra mazava ny antony nahafaty azy satria voalaza fa efa nahavita ny fifaninanana rehetra izy.
“ Nandritra ny hazakazaka valonjato metatra no nanao ezaka be ity mpiadiana ity. Rehefa tamin’ny fihodinana farany anefa dia nihaosa be izy ary tsy tonga hatramin’ny farany intsony fa nandeha an-tongotra miadana”, hoy Ratrimoarikoto Harinaivo, lehiben’ny fari-piadidiam-pampianarana na Cisco any Moramanga, omaly. Efa nanaovan’ireo tompon’andraikitry ny fanadinana ara-panatanjahantena fialana nenina ity mpiadina ity. Noentina tany amin’ny tobim-pahasalamana ihany koa saingy tsy tana ny ainy.
Nanao ezaka mafy loatra izy raha ny fanazavan’iry tompon’andraikitra iry. Notsindriany ihany koa fa tomombana tsara ny fahasalaman’ilay tovovavy talohan’ny nanaovany an’io adina ara-panatanjahantena io. “Nilaza ho tsy nanana olana izy rehefa nanontanian’ny reniny fa tonga fadim-bolana fotsiny ihany”, hoy hatrany Ratrimoarikoto Harinaivo.
Etsy andanin’izay, fantatra fa nahazo alalana hanao ny adina ara-panatanjahantena ara-batana ilay tovovavy satria mantanjaka tsara. Mianatra any amin’ny sekoly tsy miankina iray any Moramanga io mpiadina io.
Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny fanadinana ara-panatanjahantena bakalorea tany Moramanga ka hifarana ny talata ho avy izao. Nizotra tsy nisy tomika ny fanadinana, ankoatra an’io voina io, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny Cisco any an-toerana. Mba hisorohana ny olana ara-pahasalamana isan-karazany sy mety ho fahafatesana tampoka kosa no nanambaran’ny mpitsabo iray fa antony hanaovana fanazaran-tena betsaka mialoha ny fotoam-panadinana.
“ Tsy tokony hohamaivanina ny fanaovana fitsirihana alohan’ny fanadinana. Mila mitady vahaolana ny mpitsara hafa rehefa fantatra fa misy antony tsy hahafahan’ny ankizy iray miatrika ny fanadinana ara-panatanajahantena ho fisorohana ny mety ho fahafatesana tampoka”, hoy ny filazan’io mpitsabo io. “ Ho an’ny tranga na fadim-bolana , ohatra, tsy tokony hanao fampiasam-batana mafy loatra satria efa misy rà very mandritra izany, ka misy hery miala amin’ny vatana ”, hoy ny fanampim-panazavan’ny mpitsabo.
Fikarakarana taratasy etsy ambohidahy :: An-jatony isan’andro ireo manamboatra fahazoan-dalana mamily